Global Voices teny Malagasy » Belarosia anaty fisafotofotoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Aogositra 2020 14:26 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel, Maxim Edwards Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Petakofehy nataon'ilay mpanakanto Belarosiana monina ao Prague Rufina Bazlova, mampiseho ny fifanolanana eo amin'ny polisy misahana ny rotaka sy ny mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny firenena niaviany. Sary (c): Rufina Bazlova. Nahazoana alàlana.
Mandalo krizy politika, izay ilay mety tena goavana indrindra hatramin'ny nahazoany fahaleovantena i Belarosia. Ity firenena Eoropeana atsinanana ity izay misy mponina manodidina ny 10 tapitrisa dia nentin'ny Filoha Alyaksandr Lukashenka nanomboka tamin'ny taona 1994. Tamingana mahery ity mpitantana toeram-piompiana iombonana teo aloha ity. Nandritra ny 20 taona mahery, nampandamoka ny mpanohitra ara-politika izy, nampifanohitra an'i Rosia amin'ny Vondrona Eoropeana ary nanao famoretana ny mpanohitra tamin'ny fomba mandaitra tsy nisy fiantrana. Amin'ny gazety iraisam-pirenena, fantatra amin'ny maha-mpanao didy jadona farany ao Eoropa azy izy. Mandritra izany fotoana izany, manana ny fahefana feno izy ary nanantena ny hanohy izany fomba izany, nandresy mora foana tamin'ny fifidianana ny 9 aogositra ka nandray ny fe-potoana hitondrany fahenina ho filoham-pirenena.
Iray ihany ny fifidianana tao Belarosia no nankatoavin'ny mpanara-maso iraisam-pirenena fa malalaka sy ara-drariny. Toa hita fa vonona ny hanohy izany fomban-drazana izany i Lukashenka, nandresy mora foana tamin'ny fifidianana ny 9 aogositra izy ka nandray ny fe-potoana hitondrany fahenina ho filoham-pirenena. Nesorina tsirairay tamin'ny fifaninanana ireo mpifaninana taminy tena nantenaina. Notanana ny faran'ny volana Mey noho ny fiahiahiana azy ho mpitsikilo vahiny ilay bilaogera malaza Syarhei Tsikhanouski. Notanana tamin'ny tapaky ny volana Jona ilay mpandraharaha Viktar Babaryka, izay nolavina ny firotsahany ho fidiana. Tamin'ny faramparan'ny volana Jolay, nandositra tany Rosia noho ny tahotra fanenjehana politika ilay mpandraharaha Valery Tsepkalo, izay nolavina ihany koa ny firotsahany ho fidiana. Nanomboka tsindraindray tamin'ny volana Jona ny fihetsiketsehana an-dalambe. Nosamborina ireo mpanao fihetsiketsehana ary naneho fihetsika araka ny efa nampoizina i Lukashenka, tamin'ny fanesoana azy ireo ho mpisolelaka voakaraman'ny fahefana vahiny.
Fa rehefa nisoratra anarana ho kandida filoham-pirenena teo amin'ny toerany ny vadin'i Tsikhanouski, Sviatlana Tsikhanouskaya dia niray hina nanohana ity olom-baovao ity ny mpanohitra an'i Lukashenka. Tsotra ny tanjon'i Tsikhanouskaya: ny hametra-pialana aorian'ny enim-bolana, izay hanaovana fifidianana malalaka sy marina. Saingy tsy nampino ny Belarosiana rehefa nivoaka ny valim-pifidianana ofisialy ny marainan'ny 10 aogositra. Voalaza fa 80 isan-jato ny vato azon'i Lukashenka raha folo isan-jato fotsiny ny an'i Tsikhanouskaya.
Niharatsy ny toe-draharaha nanomboka teo. Nandositra nankany Litoania mpifanolo-bodirindrina i Tsikhanouskaya. Belarosiana an'arivony no nanao fihetsiketsehana nanerana ny firenena iray manontolo, izay nahitana ny fanakatonana ny aterineto, ny korontana vokatry ny olan'ny asa, ny fandrahonana mpanao gazety, ary ny fitantarana azo inoana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana voatazona ka niharan'ny fampijalian'ny mpitandro ny filaminana. Mpanao fihetsiketsehana marobe no voalaza fa maty nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Maro ny mpanara-maso ankehitriny no mihevitra fa nanjavona ny fahavononan'i Lukashenka hanao ny tsara. Raha manjaka izy dia hiankina amin'ny tahotra ao anatin'ny dingana tsy mbola nandalovan'ny fenitra Belarosiana fahita hatrizay. Samy mahalala daholo izany tanjona izany ireo mpifaninana aminy.
Noho izany dia toa tsy azo inoana ny isian'ny marimaritra iraisana amin'izao fotoana satria tsy mitaky afa-tsy ny tatitra feno momba ny valim-pifidianana sy ny fialan'i Lukashenka amin'ny maha filohan'ny Belarosiana azy ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpanohitra ankehitriny.
Vakio bebe kokoa ireto fitantara manaraka ireto amin'ny fanohizanay ny fanavaozam-baovao momba ity pejy ity:
Three naive questions about Belarus 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/16/149383/
 ‘This is a partisan movement of a partisan nation': A Belarusian poet reflects on her homeland's turmoil: https://globalvoices.org/2020/08/14/this-is-a-partisan-movement-of-a-partisan-nation-a-belarusian-poet-reflects-on-her-homelands-turmoil/?fbclid=IwAR2OiOUN5cl-OkJX0YCb6ROzUec9q8Ph6S86RekuTTDXp1TTgMaCPCuZutU
 Belarusian workers support protesters with growing strikes : https://globalvoices.org/2020/08/13/belarusian-workers-support-protesters-with-a-general-strike/
 Meet the artist embroidering Belarus’ protests: https://globalvoices.org/2020/08/11/meet-the-artist-embroidering-belaruss-protests/
 Belarus shuts down internet as thousands protest election results : https://globalvoices.org/2020/08/10/belarus-shuts-down-internet-as-thousands-protest-election-results/
 Three naive questions about Belarus : https://globalvoices.org/2019/08/06/basic-belarus/